Method ၏ Lewie Carson သည် RSP ပညာရေးတွင် VFX အနုပညာရှင်တစ် ဦး အဖြစ်မည်သို့အောင်မြင်ရမည်ကိုလေ့လာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Method ကိုရဲ့ Lewis Carson RSP ပညာရေးမှာ VFX အဆိုတော်အဖြစ်အောင်မြင်ဖို့ကိုဘယ်လိုသင်ယူ
ခငျြးကို RSP ပညာရေးဘွဲ့ရနဲ့ Chris, La အတူ Lewis Carson (လက်ဝဲ) ။
Adelaide, တောင်သြစတြေးလျ-Lewis Carson သူအပါအဝင်အများအပြားစတူဒီယိုရုပ်ရှင်အပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပြီးဘယ်မှာမဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်နည်းလမ်းမှာတစ်ဦးအငယ်တန်းစာစီဖြစ်ပါတယ် Black ကလူ: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ, ယောဟန်သည်မတရားသောသူ: အခန်း3- Parabellum, Tomb Raider, ခရစ္စတိုဖာရော်ဘင်, Aquaman နှင့် AXL။ မူလကမဲလ်ဘုန်းကနေ Lewis 2016 အတွက်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ခြေရာကောက်အတွက် Sun ကရုပ်ပုံများ '' ဘွဲ့လွန်လက်မှတ်အစီအစဉ် Rising ပြီးစီးခဲ့သည်။ RSP မှာ, သူ roto / ဆေးသုတ်အလုပ်နှင့်ဖွဲ့စည်းမှုအဘို့အစက်မှုလုပ်ငန်းစံအလေ့အကျင့်ကသူဒီနေ့အလုပ်အပေါ်လုပ်ကိုင်အတူတူကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူခဲ့တယ်။
Lewis Carson မကြာသေးမီကသည်သူ၏လေ့ကျင့်ရေး, အလုပ်နှင့်အနာဂတျအတှကျအစီအစဉျမြားအကြောင်းကို RSP နှင့်အတူနှုတ်ဆက်လေ၏။
Lewis Carson: အစဉ်မပြတ်ငါတီဗီရှိုး, ရုပ်ရှင်များ, ကာတွန်း, ထိုအပေါငျးတို့သကြိုက်တယ်ပါတယ်။ ကျွန်မအလွန်ငယ်ရွယ်စဉ်ကနေကိုချစ်၏။ ဒါပေမယ့်ကျွန်မအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှိချင်ပါတယ်စိတ်ကူးခဲ့ပါဘူး။
LC: ၎င်းသည်အမေရိကန်အရာနှင့်တူသလိုပဲ။ အဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူကိုမျှသြစတြေးလျ၌လုပျမလဲ သို့သော်ထိုအခါသူတို့သည်ရိုက်ကူး အဆိုပါ Matrix ဆစ်ဒနီ၌တည်၏။ ဒါဟာငါ့ကိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့အဘို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိကွောငျးကိုထင်စေ၏။ ငါအချိန်တွင်လည်းငယ်ရွယ်ခဲ့ပေမယ့်ငါ့စိတ်ကို၏နောက်ကျောမှာညပ်မိ။
RSP: သငျသညျမဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက် RMIT မှသင်၏ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့မှီ?
LC: ဒါအမှန်ပဲ။ ငါမျက်နှာပြင်နှင့်မီဒီယာတစ်ခုအဆင့်မြင့်ဒီဂရီရှိသည်။
RSP: သင်သည်အဘယ်သို့ RSP ရဲ့ဘွဲ့လွန်လက်မှတ်အစီအစဉ်ကိုမှထိုအရပ်မှသွားရတာလဲ
LC: ဒါဟာရေတိုနှင့်အထူးကြပ်မတ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာစတူဒီယိုတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်, စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အမှန်တကယ်ရုပ်ရှင်အပေါ်လုပ်ဆောင်နေအနုပညာရှင်တွေနေသောလူမျိုးထဲကနေလေ့လာသင်ယူဆိုလိုသညျ။ ဒါဟာတကယ့်စတူဒီယို၏ ins နှင့်တနေရာကြည့်ဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့တစ်အရသာရယူပါ။ ဒါဟာဖြားယောင်းတံပိုးမှုတ်သောအခါငါချစ်၏။
RSP: အဘယ်ကြောင့်သင် Composting နှင့်ခြေရာခံအစီအစဉ်ကို select လုပ်ခဲ့တာလဲ
LC: ဒါဟာကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းသလိုပဲ။ ငါအရှိဆုံးကျောင်းသားများကို-ငါ 25-နှင့်ဖြစ်ခဲ့သည်ငါယခင်ကဖွဲ့စည်းမှုအတွက် dabbled ချင်ပါတယ်ထက်နည်းနည်းအသက်ကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အပျနှံခဲ့ပေမယ့်ငါပျော်မွေ့ရာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သည်။
LC: ဟုတ်ပါတယ်။ ငါကအကြောင်းကြားသိပေမယ့်ဖွင့်လှစ်ဘယ်တော့မှခဲ့သည်။
LC: ပထမတော့သော်လည်းငါ့သင်တန်းပို့ချဒီတော့စိုးရွံ့မအောင်မှာအလွန်ကောင်းခဲ့တာနဲ့ကျွန်မလျင်မြန်စွာကအဆင်ပြေဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါမကြာမီသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုအကဲဖြတ်ဖို့ဘယ်လိုကြောင့်ချဉ်းကပ်ဖို့ဘယ်လို, သင်အသစ်တစ်ခုကိုပစ်ခတ်ရသည့်အခါဘာလုပ်ရမှန်း, အခြေခံသင်ယူခဲ့တယ်။ သူများသည်သင်လူတန်းစားမှလူတန်းစားကနေခုန်မယ့်အစားခြောက်လသို့မဟုတ်ရှစ်နာရီတဦးတည်း program နဲ့အလုပ်လုပ်နေကြရတဲ့အစဉ်အလာတက္ကသိုလ် setting ကိုရနိုင်မည်မဟုတ်ပါကျွမ်းကျင်မှုရှိပါသည်။
LC: ဟုတ်ပါတယ်, ငါကိုပြု၏။ အလွန်ကောင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကသင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုတခြားမရနိုငျသောအရာများစွာကိုနှင့်ရှယ်ယာအကြံဉာဏ်ကိုသင်ပေး။ Plus အား, သင်သည်အခြားဌာနများသူတို့စတူဒီယိုပိုက်လိုင်း fit ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ပုံကိုလေ့လာပါ။ သူတို့ကအမှုကိုပြုနှင့်မည်သို့အပ်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်းအတိအကျဘာလုံးကိုအကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်သိတယ်။ ကျွန်မစတင်လုပ်ကိုင်သည့်အခါငါအသိပညာရှိခဲ့ဘူးလျှင်, ငါရှေ့မီးတစ်ဦးဒရယ်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။
RSP: ဒီတော့ RSP မှာသင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်သင်သည်ပြင်ဆင်?
LC: ဒါဟာစုံလင်ခြင်းရှိ၏။ ငါ Method ကိုမှာစတင်လုပ်ကိုင်သည့်အခါမျှမကြီးတွေသင်ယူမှုကွေးရှိ၏။ ငါဖြောင့်ကမှာ သွား. ငါလုပ်နေတာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့သည်ငါ့ထံမှမျှော်လင့်ထားသည့်အရာကိုသိသည်။
RSP: က hard ကြောင်းပထမဦးဆုံးအလုပ်ကိုရှာဖွေခဲ့သလား
LC: ဒါဟာတချို့အချိန်ကိုယူ။ ငါ showreels နှင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တွေအများကြီးထွက်စလှေတျတျော, ငါလစဉ်လတိုင်းကလူ pestered ။ သင်တစ်ဦးတုန့်ပြန်မရကြဘူးသောအခါစိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်ပါသည်, သို့သော်သင်မယ့်စောင့်ရှောက်ရပေမည်။
RSP: အလုပ်၏အဘယျ type ကိုသငျသညျ Method ကိုမှာလုပ်နေကြတာလဲ
LC: Roto နှင့် cleanup ။
RSP: သင်တို့ကို RSP မှာလေ့လာခဲ့အရာကိုအလားတူဖြစ်သနည်း
LC: တကယ်ကောင်းတယ်။ ငါကမေတ္တာရှင်တာပါ။ ငါအရာအားလုံးထက်ဘို့ဆန္ဒရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ငါကြီးကြီး-ဘတ်ဂျက်ရုပ်ရှင်, ငါအသက်ငယ်စဉ်အခါအကြောင်းကိုအိပ်မက်မက်သည့်ပစ္စည်းပစ္စယပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်တာပါ။ ဒါဟာပျော်စရာအလုပ်နှင့်ကြီးမြတ်ပတ်ဝန်းကျင်ပါပဲ။ ငါတကယ်တန်ဖိုးထား။
LC: ကျွန်မနည်းနည်းအဘို့အကနေဒါ, အမေရိကသို့မဟုတ်ပင်လန်ဒန်မြို့ရှိအလုပ်လုပ်ရန်ကိုချစ်ချင်ပါတယ်။ ငါ၏အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းငါ့ကိုယူဘယ်မှာထို့နောက်ငါမြင်ပါလိမ့်မယ်။
LC: သေချာသည်။ ရုပ်ရှင်နှင့်တီဗီရှိုးပိုပိုပြီးအမြင်သက်ရောက်မှုရှိသည်သွားနေကြသည်။ ဒါဟာကြီးထွားလာစျေးကွက်ပါပဲ။
LC: အဲဒါကိုကပ်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းစတူဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထဲကကိုရှာပါ။ ငါသာသြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်ကိုကြည့်ရှု, သင်မူကားဘယ်နေရာမှာမဆိုအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်အလုပ်မလုပ်အဖြစ်သွားလာချင်လျှင်, အခွင့်အလမ်းသင့်လက်၌တည်ရှိ၏။ ငါသည်ဤအလုပ်ကိုအကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်အခြားအရာကသိပ်ပျော်စရာရဲ့ပါ! သူတို့ကချစ်သောကြောင့်သူတို့ရုပ်ရှင်တွေကိုခံစားနေသောကြောင့်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်သူကိုလူတွေကကလုပ်ပါ။ အဘယ်သူမျှမကဤစက်မှုလုပ်ငန်းသို့ဆွဲငင်သည်။ သူတို့ကရှေးခယျြခဲ့သောကွောငျ့ကဒီမှာသူလူတိုင်းကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းအကောင်းတစ်ဦးအချိန်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
RSP: ဒီတော့ RSP မှာလေ့ကျင့်ရေးကောင်းတစ်ဦးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ထွက်လှည့်။
LC: ဟုတ်ပါတယ်။ 100 ရာခိုင်နှုန်းကို
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida ပညာရေး ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor SJGolden - ကိုလိုနီ / ချီကာဂို TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် Visual Effects 2019-08-09
ယခင်: Pixelworks TrueCut ပလက်ဖောင်းက "Bravest" ကိုရုပ်ရှင်ရုံကို Motion ဆောင်ကြဉ်း
နောက်တစ်ခု: လီစိစစ်မှုများခြင်းဖြင့်စတင် hood ကိုနှင့်တွဲဖက် Adapter ကို